शरीरको तौल बढेको छ ? यस्ता छन् घटाउने तरिका | Kendrabindu Nepal Online News
१८ श्रावण २०७७, आईतवार ११:४५
हामी सबैलाई थाहा छ कि जाडो मौसममा वजन घटाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । किनभने गर्मीमा मेटाबलिजम धेरै राम्रो हुन्छ, र वजन कम गर्न सजिलो हुन्छ । यो मनसुनको मौसममा समेत रहन्छ । गर्मी र वर्षाको मौसममा सूर्यको किरण पनि राम्रो हुन्छ, त्यसैले शरीरमा भिटामिन डी पनि प्रशस्त मात्रामा हुन्छ ।
आज हामी तपाईंलाई विशेष मनसूनको खानाको बारेमा बताउँदैछौं । जसको सहायताले तपाईं छिटै र सजिलै तौल घटाउन सक्नुहुन्छ । सकेसम्म तरल पदार्थ सेवन गर्नुहोस् ।
मनसूनको मौसममा, धेरै पसिना आउने हुन्छ, त्यसैले शरीरलाई हाइड्रेटेड राख्नु आवश्यक छ । तपाईंले जाडो मौसममा बलपूर्वक पानी पिउनु पर्दछ, तर मनसुन मौसमले तपाईंलाई अधिक पानी पिउन बाध्य बनाउँछ । पानी आवश्यक छ किनकि यसले शरीरमा आधारभूत रासायनिक प्रक्रियाहरूलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दछ । यदि तपाईंलाई सादा पानी मन पर्दैन भने, तपाईं अन्य हाइड्रेटिंग पेयहरू लिन सक्नु हुन्छ जस्तै नरिवल पानी, निम्बू पानी, जलजीरा, सुन्तलाको रस आदि । साथै, कहिले काँही हामी प्यास लाग्दा पनि भोकाएको महसुस गर्दछौं । त्यसैले अर्को पटक खाना खाए पछि भोकाएको जस्तो लाग्छ भने एक गिलास पानी पिउनुहोस् ।
मौसमी फल र सब्जीको सेवन गर्नुहोस्
यस मौसममा धेरै फलफूल, तरकारीहरू, जामुन र अन्नका थुप्रै प्रकारहरू उपलब्ध हुन्छन् । फलफूल र तरकारीहरू एन्टीअक्सीडेन्टस्ले भरीपूर्ण हुन्छ । जसले वजन घटाउन सहयोग गर्दछ । यस मौसममा खरबुजा, तरबूज, मेवा र आँप जस्ता फलफूलहरू खानुहोस् । तरकारीमा करेला, लौका र फर्सी खानुहोस् । यसमा क्यालोरीन कम हुन्छ र पोषणले भरिपूर्ण हुन्छ ।
प्रोबायोटिक आवश्यक छ
दैनिक खानामा दही, लस्सी जस्ता चीजहरू अवश्य सेवन गर्नुहोस् । यी सबै चीजहरू पेटको लागि राम्रो हुन्छ र खाना पचाउन समेत मद्दत गर्दछ । दहीले हाम्रो शरीरलाई चिसो प्रदान गर्दछ र प्रोटीन, भिटामिन डी र क्याल्सियमको एक राम्रो स्रोत समेत हो ।
बेलुकाको खाना हल्का मात्र
मौसम चाहे जुनसुकै होस्, बेलुकाको खाना सधैं हल्का मात्र लिनुहोस् । किनभने दिन ढल्दै जाँदा हाम्रो मेटको क्रममा, हाम्रो मेटाबलिजम समेत कम हुन्छ । शरीरलाई बढी खाना पचाउन गाह्रो हुन्छ ।
तारेको, भुटेको खाना नखानुहोस्
यस मौसममा तारेको, भुटेको खाना भन्दा स्टीम्ड, ग्रील्ड वा पोलेको खाना खानु राम्रो हुन्छ । अधिक तेलमा पकाइएको खाना पचाउन गाह्रो हुन्छ । साथै यसले खानाको क्यालोरीन पनि बढाउँदछ ।
Prevदुई जना ट्राफिकमा कोरोना भएपछि बग्गीखाना पूर्णरुपमा सिल, ३७५ ट्राफिक प्रहरी क्वारेन्टाइनमा
१५ दिन कडा लकडाउन वा कर्फ्युको बिकल्प छैन : डा. रवीन्द्र पाण्डे (जनस्वास्थ्य विज्ञ)Next